nattalin: ဖုန်းပြောရင် အသံပြောင်းသုံးမယ်
မိမိဖုန်းပြောသောအသံကိုပြောင်းပေးမဲ့..“iVoice Changer” for iphone လေးပါ
Myanmar Mobile App Store | May 31, 2012 | 10 Comments
“iVoice Changer” Work 100% (Afterabig research)
iVoice Changer လေးက တကယ့် ဖုန်းထဲမှာ အသံပြောင်းပေးနိုင်မဲ့ ကောင်လေးပါ…..
ဖုန်းခေါ်နေစဉ်အတွင်း…မိမိရဲ့ အသံကို (pitch) ကိုပြောင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်..။
ဖုန်းခေါ်ထားစဉ် 1 (သို့)3ကို နှိပ်ခြင်းဖြင့်…မိမိအသံရဲ့ (pitch) ကိုချိန်းနိုင်မှာပါ..
iVoice Changer ဆိုတဲ့ Cydia tweak လေးကို ဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတော့……
1. ဘယ်နိုင်ငံကနေသုံးမယ်ဆိုတာရွေးပေးရပါမည်။( Canada, Denmark, Brazil, France, Germany, etc.)
2. မိမိဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်သွင်းပေးရပါမည်။ (This number appears on your friends phone when he receives the call)
3. မိမိ ဖုန်း စာအုပ်မှသောလည်းကောင်း၊ နံပါတ်အားတိုက်ရိုက်နှိပ်ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း..ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်…။
အသံကို အနိမ့်မှ အမြင့်သို့ ပြောင်းနိုင်ပါတယ်….
( Highest ဆိုရင် အသံစူးစူး (ကလေးအသံ)ဖြစ်သွားမည်။)
( Lowest ဆိုရင် အသံသြသြ(အဖိုးကြီးအသံ) ဖြစ်သွားမည်။)
ဖုန်းခေါ်ထားစဉ် အတွင်းလဲ ပြောင်းနိုင်ပါသည်….
Note: Your phone will dial toaremote server using an international or premium rate number, and rates will apply. For more information.
“iVoice Changer” လေးကို Cydia တွင်…BigBoss repository source မှဒေါင်း၍ယူနိုင်ပါတယ်….
Cydia==>Search မှနေ၍လဲ ရှာဖွေရယူနိုင်ပါတယ်….။
Cydia မှမရသူများ..ဒီမှာ ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်.. Download iVoice Changer.deb
Category: Cydia application များ
အဆင်ပြေပါစေ .... နည်းပညာ-ကိုညီ